Odisha kacha mma njem nleta | Onye nlekọta njem Agency Odisha
Ndụ bụ njem, ịgagharị na njem na njem na-adọta anyị. Njem na-ewepụta oge nke nzuzo na ihe omimi, mkpali na mmụọ nsọ, udo na ịnakwere ... oge ntụrụndụ na ememe. Usoro nsonye anyị na-eji nlegharị anya njem nke Odisha na-ekpughe akụ zoro ezo nke Odisha.
Ezigbo ụlọ nsọ ma ọ bụ akara ngosi Iconic, Ebe obibi anụ ọhịa ma ọ bụ iyi egwu Rom ... Get propelled to travel to Odisha na Travel Travel Video anyị. Cheretụ oge maka ụbọchị gị na-agwụ ike iji lee usoro vidio anyị ma were onwe gị na Odisha.